I-EU ihlaziya isidingo sokunciphisa ukungcola lapho kubhekene nokuguquka kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ukukhishwa kwegesi ebamba ukushisa okubangela ukufudumala kwembulunga yonke kufanele kuncishiswe ngokushesha okukhulu. Izinhloso zesivumelwano saseParis kumele kuhlangatshezwane nazo uma singafuni ukuthi amazinga okushisa aqhubeke nokukhuphuka.
Ngokuya ngohlaziyo olusha lwe-panoramic ngesenzo se-EU kwezamandla nokuguquka kwesimo sezulu okushicilelwe ngu iNkantolo Yabacwaningi Bamabhuku YaseYurophu, isenzo esisebenzayo emkhakheni wamandla kubalulekile ekulweni nokuguquka kwesimo sezulu. Yiziphi izinyathelo okufanele zithathwe yi-European Union ukujwayela ukuguquka kwesimo sezulu?
1 Ukuhlaziywa kwephaneli
2 Amandla nokuguquka kwesimo sezulu
3 Izinguquko kumodeli yamandla
Ukusetshenziswa kwamandla kuyahambelana Ama-79% wokukhishwa kwegesi engcolisa ukushisa e-European Union. Ngakho-ke, kuyadingeka ukugxila ekwehliseni ukungcola ngokushintsha ukusetshenziswa kwamandla nemithombo.
Ngokusho kwabacwaningi mabhuku balokhu kuhlaziywa, ukukhishwa kwegesi ebamba ukushisa kufanele kuncishiswe ngokushesha okukhulu ukuze kukwazi ukujwayela futhi ngasikhathi sinye kunciphise imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu, kunciphise imithelela kubantu baseYurophu ngangokunokwenzeka.
Isimo sezulu saseYurophu sizohluka kakhulu kunanamuhla ekupheleni kwekhulu, size sicabange ukuthi izinga lokushisa eliphakeme alifinyeleli ibe ngaphezu kuka-2 ° C ngokusho izinhlinzeko zesivumelwano saseParis.
Amandla nokuguquka kwesimo sezulu
Abacwaningi mabhuku baqinisekisa ukuthi ukusetshenziswa nokukhiqizwa kwamandla kuhlobene kakhulu nokuguquka kwesimo sezulu, ngoba ukukhiqizwa kwamandla okungaveli emithonjeni evuselelekayo efana nelanga, umoya, njll. Zikhipha amagesi abamba ukushisa abamba iqhaza ekufudumaleni kwembulunga yonke.
Ukukhiqizwa kwamandla kusuka kumandla okubasa kanye nokusetshenziswa kwamandla ezokuthutha, izimboni, amakhaya nezolimo ndawonye kubalwa I-79% yokukhishwa kwegesi ekhipha ukushisa kwe-EU.
Njengoba ukukhishwa kwegesi kuyinkinga enkulu kwisimo sezulu seplanethi, kubalulekile ukuthi i-EU iyinciphise. Ukuqagela kwamanje kukhombisa ukuthi kuningi okusadinga ukwenziwa ukufeza izinhlosongqangi zowezi-2030 nezingama-2050 zokunciphisa ukukhishwa kwegesi engcolisa umoya.
Konke lokhu kuzoba yinselelo emazweni angamalungu, ngoba hhayi nje kuphela ukuthi kuzodingeka bavumelane nokuguquka kwesimo sezulu, kodwa futhi kuzofanele bazame ukunciphisa nokuguqula imodeli yamanje yamandla. Ukushintsha indlela amandla wezwe akhiqizwa ngayo akulula. Ngalesi sizathu, kuzoba yinselelo ukuguqula izindlela zokukhiqiza futhi kuziholele ekuguqukeni kwamandla lapho kusebenza khona amandla avuselelekayo namandla.
Izinguquko kumodeli yamandla
Imodi eshesha kunazo zonke yokuzivumelanisa nokushintsha kwesimo sezulu inguquko kumodeli yamandla e-EU.
Abacwaningimabhuku babheka ukuthi, emkhakheni wezamandla, isici esibalulekile sesenzo se-EU ukusungulwa kwemakethe yamandla yangaphakathi ukuvumela ukusakazwa kwamahhala kwegesi nogesi kanye nokuhweba kwayo ngaphandle kwemingcele kuyo yonke insimu. we-EU. Inhloso yemakethe yamandla yangaphakathi kuzuzwe izinjongo zenqubomgomo yamandla e-EU yokunikeza amandla angabizi, ngamanani ancintisanayo, asimeme imvelo futhi aphephile, ngendlela enenzuzo.
Izinhloso nezinjongo ezibekiwe zonyaka ka-2030 no-2050 ziyinkimbinkimbi kakhulu ukufeza futhi zizodinga umzamo omkhulu ohlangothini lwawo wonke amazwe aseLungu. Kodwa-ke, ukuzibophezela okumele kufakwe ngaphakathi, ngoba kufanele kwenziwe imizamo eyengeziwe ukuze ikwazi ukucacisa izinqubomgomo zokwenza nokunciphisa amagesi abamba ukushisa.
Phakathi kuka-2071 no-2100, isimo sezulu eYurophu sizohluka kakhulu kunaleso sango-1961-1990 ngokwanda okungu-2 ° C kusuka emazingeni angaphambi kwezimboni. Ukucatshangelwa kokukhuphuka okungu-2 ° C yisilinganiso somhlaba: noma ngabe kutholakala, izinga lokushisa lizodlula kakhulu leli zinga ezifundeni ezithile.
Kumele sinciphise ukukhishwa kwegesi engcolisa ukushisa ngonyawo lomnyama ngazo zonke izindlela ukuvimbela izimo zezulu zalolu hlobo ukuthi zingabikho.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » I-EU ihlaziya isidingo sokunciphisa ukungcola lapho kubhekene nokuguquka kwesimo sezulu